Archive du 20170726
Fitondrana HVM Mitanila sady miangatra
Nivoaka omaly ny didim-pitsarana momba ny raharaha iray mahasaringotra an’i Alain Ramaroson, ka voaheloka higadra herintaona sazy mihatra sy mandoa onitra 950 tapitrisa ariary ho an’ny mpitory ity mpanao politika filohan'ny Antoko Masters ity.
Ravalomanana sy ny Afrikanina tatsimo Nifampidinika teny Faravohitra
Nihaona tamin’i Marc Ravalomanana teny amin’ny trano fonenany teny Faravohitra nandritra ny ora iray sy sasany omaly hariva ireo delegasionina avy amin’ny governemanta Afrikanina tatsimo izay mamita iraka eto Madagasikara amin’izao fotoana.
Dr Randriamiarisoa Joseph Mila havaozina ny fanaovana politika
Heno sy ventesina eny anivon’ny fiarahamonina Malagasy isan’andro ny demokrasia, ny fanjakana tsara tantana, ny tany tan-dalàna na koa ny maro an’isa parlemantera.
Filohan’ny Zah’gasy “Kandida filoha aho raha…”
Ho feno herintaona amin’ny volana aogositra izao ny fikambanana Zah’gasy sahy mandroso, izay tarihin’ny filohany Jean Navandahy Ratiharison.
Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy Mila mangarahara, hoy ny Voifiraisana
Nandefa taratasy any amin’ny filohan’ny komity mpifantina ireo ho mpikamban’ny Filankevitry ny fampihavanana Malagasy (CFM) ny Vovonana Iombonan’ny Firaisamonim-pirenena eto Madagasikara (VOIFIRAISANA) mba hanolorana soso-kevitra amin’ny sivana sy fifantenana hatao.
Rado Rabarilala Sendikalista “Olona mahay mifandray amin’ny vahoaka no ho tompon’ny ampitso”
Feno roa taona katroka amin’izao volana jolay 2017 izao no nanombohan-dRado Rabarilala sendikalista ao amin’ny orinasa Air Mad sy ny namany ary nampiatoana azy ireo tamin’ny asany avy.
Fakana tany sy valanjavaboary ao Fenoarivo Atsinanana
Fanaratsiana ahy, hoy ny sekretera jeneralin’ny kaominina Mahoraka ao amin’ny kaominin’i Fenoarivo Atsinanana amin’izao fotoana fa tanin’olona no nalain’ny sekretera jeneraliny, Marc Rajaonarivo, akany ranon-tany hanorenany trano.
Fiatrehana ny loza voajanahary Hanatsara ny fomba fiasany ny Croix-Rouge Malagasy
Nitondra horohoro teto amintsika ny fandalovan’ny rivodoza Enawo farany teo iny, hoy Rakotonanja Claude, filoha nasionalin’ny fikambanana Croix-Rouge Malagasy.
Andro iraisam-pirenen’ny ala honko Hotanterahana any Tolagnaro anio
Mpanjono am-polony, mpitarika fikambanana mitantana ireo ala honko any Manambolo-Tsiribihina no niala ny tanànany, ka namakivaky halaviran-dàlana hatrany amin’ny 1500 km.
Rabetsara Lita “Tsy ara-dalàna ny fampiakarana ny vidin-jiro ankehitriny”
Tsy ara-dalàna mihitsy ny fampiakaran’ny orinasa JIRAMA ny vidin-jiro iainan’ny mponin’Antananarivo amin’izao fotoana izao, raha ny fanazavan-dRabetsara Lita, filohan’ny fikambanana mpiaro ny zon’ny mpanjifa RNDC.
Fitantanan-draharaha eny anivon’ny kaominina Mety hampiditra am-ponja raha tsy voafehy
Saro-pady ny asa eny anivon’ny kaominina, indrindra fa ny fitantanan-draharaha.
Tsapao aloha ny herinareo !
Efa vorona azon’adala ity fanaratsiana ny an’i Marc Ravalomanana sy ny Antoko Tiako i Madagasikara ity.
Voafonja eto Madagasikara Tsy ara-dalàna ny 50% mahery
Nisokatra omaly tetsy amin’ny DLC Anosy ny atrikasa mandritry ny roa andro hijerena izay fomba ahafahana miady amin’ny famonjana tsy ara-dalàna eto Madagasikara.
Nisy ny fidinana 50 ariary isaky ny kilao ary tokony ho marin-toerana amin’izay ny vidim-bary hoy ny avy ao amin’ny ministeran’ny varotra.